ငရမန်ကန်း အမှန်တရား | AnZarTone
by AnZarTone ငရမန်ကန်း အမှန်တရား
တစ်နေ့သ၌ လွန်စွာ အသား ဖြူသော လူတစ်ယောက်နှင့် လွန်စွာ အသား မည်းသော လူတစ်ယောက် တို့သည် ရန်ကုန်မြို့၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ လိုတရလမ်းလေးအတွင်း ဖွင့်လှစ်ထားသော လဖက်ရည်ဆိုင်လေး၏ ရှေ့မျက်နှာစာအကျဆုံး စားပွဲဝိုင်းတွင် ထိုင်လျက် ရောက်တတ်ရာရာ စကားများအား ပြောဆိုနေကြသည်ကို တွေ့ရလေ၏။ သူစိမ်းများ အနေဖြင့် ထိုလူနှစ်ယောက် ဤကဲ့သို့ ရင်းနှီးစွာ စကားစမြည် ပြောနေကြသည်ကို တွေ့ရပါမူ အထူးအဆန်း ဖြစ်နေလိမ့်မည် ဖြစ်သော်လည်း သင်္ဃန်းကျွန်း နယ်တစ်ဝိုက်တွင် နေထိုင်သူများ အဖို့မှာမူ အဆိုပါ မြင်ကွင်းမှာ ထူးဆန်းလိမ့်မည် မထင်မိချေ။
အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ၎င်းတို့ နှစ်ဦးသည် သင်္ဃန်းကျွန်းနယ်တစ်ဝိုက် ဟုန်းဟုန်းတောက် ကျော်ကြားသော “ဘိုးငယ်” ဖြစ်သောကြောင့် ပင်တည်း။ “ဘိုးငယ်” ဆိုသည်ကို ရှင်းရသော် “ဘိုး” ဆိုသည်မှာ အသား မည်းနက်သော အစ်ကိုဖြစ်သူ “ဘိုးကြီး” ကို ရည်စူး ခေါ်ဝေါ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ “ငယ်” ဆိုသည်မှာ အသား ဖြူဆွတ်သော ညီငယ်ဖြစ်သူ “ငယ်ကြီး” အား ရည်စူး ခေါ်ဝေါ်ခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။ ယင်း အတွက်ကြောင့် ၎င်းတို့ နှစ်ယောက်အား “ဘိုးငယ်” ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ကြလေ၏။
“ဘိုးငယ်” ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ခြင်းမှာလည်း ၎င်းတို့၏ ရှေ့တွင် ခေါ်ဝေါ်ခြင်း ဖြစ်ကာ၊ ကွယ်ရာတွင်မူ “ဖြူမည်းညီနောင်” ဟူ၍သာ ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲတတ်ကြလေသည်။ အဘယ်ကြောင့် ရှေ့တွင် နာမည် အပြည့်အစုံ ခေါ်၍ ကွယ်ရာတွင် အမည်ပြောင် ခေါ်ဝေါ်ခြင်း ဖြစ်သတည်း ကိုမူ စာဖတ်သူများ အနေဖြင့် ရိပ်မိကြပေလိမ့်မည် ထင်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ရှေ့တွင် အမည်ပြောင် ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲဝံ့သူ ဟူ၍လည်း သင်္ဃန်းကျွန်း နယ်တစ်ဝိုက်တွင် မရှိချေ။ ယင်းသို့ အမည်ပြောင်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါကလည်း လွန်စွာ တုတ်ခိုင်လှသော ထိုလူနှစ်ယောက်၏ လက်အတွင်း မည်သို့ သက်ဆင်းသွားရမည်ကို သိနေသောကြောင့်ပင် ခေါ်ဝံ့သူ ဟူ၍ မရှိခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ထိုလူကြီး နှစ်ယောက် အကြောင်းအား နောက်များ အလျဉ်းသင့်ပါက ရေးသား ဖော်ပြသွားပါပေအံ့။ ယခုမူ အခြားသော အကြောင်းအရာ တစ်ခုသို့ ဆက်ဦးစို့။
ထိုလူကြီး နှစ်ယောက်နှင့် ကပ်လျက် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ရှေ့မျက်နှာစာတွင် မောင်ကျော် ဟူသော လူရွယ်တစ်ယောက် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ကွမ်းယာဆိုင်လေး တစ်ဆိုင် ရှိလေသည်။ အဆိုပါ ကွမ်းယာဆိုင်လေး၏ ရှေ့တွင်မူ ကွမ်းဝယ်သူများ စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်အတွင်း ညောင်းညာခြင်းဘေးမှ ကင်းဝေးစေရန် ရည်ရွယ်၍ ထိုင်ခုံတန်းရှည် နှစ်ခုကိုလည်း ချထားပေးလေသည်။
ခုံတန်းရှည် နှစ်ခု၏ တစ်ဖက် တစ်ချက်တွင် မျက်မှန်ထူကြီးအား တပ်ဆင်ထားသော အသက် ၄၀ ကျော်အရွယ် လူကြီးတစ်ဦးနှင့် ကတုံးပြောင်အောင် ရိတ်ထားသော လူကြီးတစ်ဦးတို့သည် မှာယူထားသော ကွမ်းယာများကို စောင့်ဆိုင်းနေရင်းဖြင့် စီးကရက်တစ်လိပ်စီ ဖွာရှိုက်ကာ စကားစမြည် ပြောနေကြသည်ကို တွေ့ရလေ၏။
ထိုအခိုက်တွင် လွယ်အိတ်ကြီး တစ်လုံးအား လွယ်လျက် တောသားများ ပုံစံကဲ့သို့ ထူထူအအ နိုင်လှသော လူရွယ်တစ်ယောက်သည် မောင်ကျော် ကွမ်းယာဆိုင်လေး ရှေ့သို့ ရောက်ရှိလာလေ၏။ အဆိုပါ တောသားသည် ကွမ်းယာဆိုင် ရှေ့တွင် စီးကရက် ကိုယ်စီဖြင့် စကားပြောနေကြသော မျက်မှန်ထူကြီးနှင့် လူအား မေးလေ၏။
“ဦးလေးကြီး ….။ ကျုပ် ဖိနပ်တစ်ဖက် ပြတ်သွားတာ ပြန်ချုပ်ချင်လို့၊ အဲ့ဒါ ဖိနပ်ချုပ်ဆိုင် ဘယ်နားမှာ ရှိသလဲခင်ဗျ”
ထိုအခါ … မျက်မှန်ထူကြီး တပ်ထားသော လူကြီးမှ ၎င်း၏ လက်ကို လက်ဝဲဘက်သို့ ညွှန်ပြရင်းဖြင့် ….
“ဒီအတိုင်း တည့်တည့်သွား၊ လှယဉ် ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေး တွေ့လိမ့်မယ်။ ဖိနပ်ချုပ်ဆိုင် အဲ့ဒီ ဘေးမှာပဲ”
ထိုအခါ ကတုံးပြောင်နှင့် လူကြီးမှာ တောသားအား ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက် မျက်မှန်ထူကြီးနှင့် လူကြီး ညွှန်ပြသော ဘက်သို့ပင် ညွှန်ပြကာ ….
“အေး … ဟုတ်တယ်။ အဲ့ဒီ အတိုင်းသွား၊ ညတင် ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေး ရှိလိမ့်မယ်။ ဖိနပ်ချုပ်ဆိုင်က အဲ့ဒီဘေးမှာပဲ”
ထိုအခါ တောသားမှာ မျက်စိ ကလည်လည်ဖြင့် အဆိုပါ လူကြီး နှစ်ယောက်အား ကြည့်လိုက်ပြီးလျှင် ….
“ဦးကြီးတို့ရယ်။ ရှင်းရှင်း ပြောပေးပါလားခင်ဗျာ။ ကျုပ်က လှယဉ် ကို အရင်ရှာရမှာလား၊ ညတင် ကို အရင် ရှာရမှာလား ခင်ဗျ”
ထိုအခါ မျက်မှန်ထူကြီးနှင့် လူကြီးမှ …. “ငါ ပြောတာ နားထောင်စမ်းပါ ငါ့လူရာ။ လှယဉ်ကို အရင်ရှာ၊ ဖိနပ်ချုပ်ဆိုင်က အဲ့ဒီဘေးမှာ” ဟူ၍ ပြောလေ၏။
ထိုအခါ ကတုံးပြောင်နှင့် လူကြီးမှ …. “ဒီမှာ ငါ့ကောင်၊ ညတင် ကို ရှာ၊ မင်းရဲ့ ဖိနပ်ချုပ်ဆိုင်က အဲ့ဒီဘေးမှာကွ” ဟူ၍ ဆိုလေ၏။
ထိုအခါ တောသားမှာ ၎င်း၏ ခေါင်းအား တဖျင်းဖျင်း ကုတ်၍ ….
“ဦးကြီးတို့ရယ်။ ကျုပ်က တောသားပါခင်ဗျ။ ကျုပ်ကို မျက်စိလည်အောင် မလုပ်ကြပါနဲ့လားခင်ဗျာ။ လှယဉ် ဘေးမှာလား၊ ညတင် ဘေးမှာလား ခင်ဗျ”
ဟူ၍ မျက်နှာငယ်လေးဖြင့် ဆိုလေ၏။
ထိုအခါ မျက်မှန်ထူနှင့် လူကြီးမှ ….
“ငါ့လူရာ။ ငါ ပြောတဲ့အတိုင်း သွားစမ်းပါ။ လှယဉ် ကို ရှာ။ ဖိနပ်ချုပ်ဆိုင်ကို ရောက်လိမ့်မယ်”
ထိုအခါ ကတုံးပြောင်နှင့် လူကြီးမှ ….
“ငါ့ကောင်။ ညတင် ကို ရှာကွ။ ဖိနပ်ချုပ်ဆိုင်က အဲ့ဒီဘေးမှာ”
ထိုအခါ တောသားမှာ ၎င်း၏ ခေါင်းအား တဖျင်းဖျင်းဖြင့် ထပ်မံကုတ်ရင်း ….
“ဦးကြီးတို့ရယ် ….။ ဖိနပ်ချုပ်ဆိုင်က လှယဉ် ဘေးမှာလား။ ညတင် ဘေးမှာလား ခင်ဗျ။ ကျုပ်ကို မျက်စိ လည်အောင် မလုပ်ကြပါနဲ့ခင်ဗျာ”
ဟူ၍ သနားစဖွယ် အသံလေးဖြင့် ဆိုရှာလေ၏။
ထိုအခါ မျက်မှန်ထူကြီး လူကြီးမှ စိတ်မရှည်သော လေသံဖြင့် “လှယဉ် ဘေးမှာပါဆိုနေမှ။ သူများ ပြောတာ နားယောင်မနေစမ်းနဲ့” ဟူ၍ ဆိုလေ၏။
ထိုအခါ ကတုံးပြောင်နှင့် လူကြီးမှ “ဒီမှာ ငါ့လူ။ ညတင် ဘေးမှာ။ ညတင် ဘေးမှာ။ ငါပြောတာ ယုံလိုက်စမ်းပါ ငါ့လူရာ” ဟူ၍ ဆိုလေ၏။
ထိုအခါ မျက်မှန်ထူနှင့် လူကြီးမှာ ကတုံးပြောင်နှင့် လူကြီးအား မကြည်သလို ကြည့်ရင်းဖြင့် …..
“ဟေ့ … ပြောင်ကြီး။ ဒီကောင်က ငါ့ကို အရင်လာမေးတာ။ မင်း အေးဆေးနေစမ်း။”
ထိုအခါ ကတုံးပြောင်နှင့် လူကြီးမှ မျက်မှန်ထူနှင့် လူကြီးအား ခနဲ့တဲ့တဲ့ အသံဖြင့် ဤသို့ ဆိုလေ၏။
“ဟ မှုံကြီးရ။ မင်း မေးတော့ ငါက မဖြေရဘူးတဲ့လား။ ငါက စေတနာနဲ့ ဝင်ပြီး လမ်းညွှန်တာပဲလေကွာ။ သူ မေးတဲ့ ဖိနပ်ချုပ်ဆိုင် ကလည်း ညတင်ရဲ့ ဆိုင်ဘေးမှာ မဟုတ်လားကွ။ ငါ ဖြေတာ မှားနေလို့လား။ အဟား”
“ပြောင်ကြီး။ မင်း ညွှန်တာ မမှားဘူး။ အေး … ဒါပေမယ့် .. ဖိနပ်ချုပ်ဆိုင်က လှယဉ်ရဲ့ ဆိုင်ဘေးမှာကွ”
ဟူ၍ … ဒေါသတကြီးဖြင့် အော်ဟစ် ပြောလေ၏။
“ဟေ့ကောင် မှုံကြီး။ ညတင်ရဲ့ ဆိုင်ဘေးမှာကွ”
ဟူ၍ .. တစ်ဖန်ပြန်လည် အော်ဟစ်၍ ပြောလိုက်ပြန်လေ၏။
တောသားမှာမူ မျက်မှန်ထူနှင့် လူကြီးအား တစ်လှည့်၊ ကတုံးပြောင်နှင့် လူကြီးအား တစ်လှည့် ကြည့်ရင်းဖြင့် ၎င်း၏ ခေါင်းကိုသာ တွင်တွင်ကြီး ကုတ်၍ နေလေတော့၏။
အမှန်စင်စစ် အားဖြင့်မူ ဖိနပ်ချုပ်ဆိုင်မှာ လှယဉ် ဟူသော အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်သည့် ကုန်ခြောက်ဆိုင်လေးနှင့် ညတင် ဟူသော အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်သည့် သစ်သီးဆိုင်လေး ကြားတွင် တည်ရှိနေခြင်း ဖြစ်လေသည်။
မျက်မှန်ထူနှင့် လူကြီးမှာ လှယဉ် ဟူသော အမျိုးသမီး၏ ယောက်ျား ဖြစ်ပြီး၊ ကတုံး ပြောင်နှင့် လူကြီးမှာ ညတင် ဟူသော အမျိုးသမီး၏ ယောက်ျား ဖြစ်လေသည်။
အဆိုပါ လူကြီး နှစ်ယောက်သည် မတည့် အတူနေ လူကြီးနှစ်ဦး ဖြစ်ကာ ငယ်စဉ်အခါက အဆိုပါ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးနှင့် ကြက်ခြေခတ်သဏ္ဍာန် ချစ်ကြိုက်ခဲ့ကြပြီး ကြက်ခြေခတ်သဏ္ဍာန် အိမ်ထောင်ကြခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်လေသည်။
ကျွန်ုပ်၏ ဆိုလိုရင်းမှာမူ …..
အမှန်တရားတွင် အတ္တများ ရောယှက်နေသောအခါ တစ်ဖက်ကန်း ငရမန်ကန်းများကဲ့သို့ ဖြစ်တတ်လေသည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံး သူ့ပုံစံနှင့်သူ မှန်နေသည့် ကိစ္စရပ်များတွင် တစ်ဖက်သတ် ငြင်းခုန်ခြင်းသည် အနုပညာ မမြောက်ပေ။ လွန်စွာ မိုက်မဲပြီး အကျိုးမရှိသော ငြင်းခုန်ခြင်းသာ ဖြစ်လတံ့တည်း။
အသင် စာရှုသူများ အနေဖြင့် အထက်ပါ ကိစ္စရပ် အပေါ်တွင် မည်သို့ ထင်မြင်မိကြပါသနည်း ???
← လူဝကြီးနှင့် လူပိန်ကြီး	ဒီနေ့ ဘလော့ဂ်ဒေး … တဲ့။ →